Kooxo hubeysan oo ah burcad u dhalatay dalka Koofur Afrika ayaa Xalay ganacsade Soomaaliyeed waxay ku dileen deegaanka lagu magacaabo Tempisa oo ka tirsan gobolka Limpopo. Muwaadinka Soomaaliyeed ee lagu dilay Koofur Afrika ayaa lagu magacaabi jiray Shaafici Cabdulle Saneey, kaasoo burcadu ay ku dhex dileen goobtiisa ganacsi.Meydka Marxuumka waxaa...
Wasiiru dawlaha Arrimaha Debedda Soomaaliya oo Sheegay in Dawladda Soomaaliya Difaaceyso Dalkeeda.
Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Bilaal Maxamed Cusmaan, ayaa sheegay dowladda Kenya in aysan wax dan ah ugu jirin inuu xumaado xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya. Wasiir udowlaha ayaa sheegay dowladda Soomaaliya in ay ka shaqeynayso sidii xirirka labada dal uu u noqon lahaa mid wanaagsan. Laakiin, wuxuu caddeeyay haddii Kenya...
Wararka naga soo gaaraya degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi saacadahii ugu dambeeyay uu ka jiray barakac aad u xoogan oo ay sameynayaan dadka ku dhaqnaa xaafadaha magaaladaasi. Barakaca dadka deganaa Guriceel ayaa yimid kadib markii ay soo wajahday cabsi xoogan oo ay ka qabaan in magaalada...
Sanad guuradii 4’aad ee kasoo Wareegtey Qaraxii Zope oo ay Ka Hadleen M/weyne Farmaajo iyo R/wasaare Rooble.
Sannad -guuradii afaraad ayay maanta ku beegan tahay markii uu dhacay qaraxii 14 -kii Oktoobar 2017, qaraxaas oo ahaa qarixii ugu dhimashada badnaa uguna burburka badnaa ee ka dhaca Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. In ka badan 600 qof ayaa ku naftooda ku waayay, ka gadaal markii gaari xamuul ah...
R/wasaare Rooble oo Kulan La Qaatey Madaxdii Goob Joogga u aheyd Go’aankii Maxkamadda ICJ.
Raysal wasaaraha Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan kula yeeshay aalada Fogaan Araga, wafdigii dowladda Soomaaliya uga qeyb galay dhageysiga go'aan ka gaaristii kiiska dacwada Badda ee Maxkamada Aduunka ICJ. Raysal wasaaraha Soomaaliya ayaa horey ugu bogaadiyay wafdigii dowlada Soomaaliya howsha qaranka u qabteen, islamarkaana waxuu u mahadceliyay...
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax khasaare xoogan geystay oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan Militariga dalka Kenya oo ku socdaalayay deegaano ka tirsan gobolka Lamu. Qaraxa oo la sheegay inuu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso oo laga hago meelaha fog fog ayaa haleelay gaari ay saarnayeen ciidamo...
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa rajo xumo ka muujiyay xukun ay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ka soo saartay muranka badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Xukunka la soo saaray Talaadadii shalay, ayay maxkamadda ICJ waxay siisay Soomaaliya inay maamusho inta badan dhul baddeedkii ay dowladda Kenya haysatay. Madaxweyne...
Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, Axmed Madoobe ayaa sheegay in abaaro iyo xanuuno aan la garanaynin ay ka jiraan qeybo kamid ah deegaanada Jubbaland ay dhibaato ba’an ku hayaan xoolo dhaqatada iyo beeraleeyda Jubbaland, taasoo qatar ku ah nolosha dad badan oo kamid ah bulshada ku dhaqan...
M/weyne Farmaajo oo ka Hadley Go’aanka Maxkamadda Caalamiga ah ee Muranka Badda.
Madaxweynaha dowladda federalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa jeediyey khudbad ku saabsan guusha taariikhiga ah ee go'aanka Kiiska Badda Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa khudbadiisa si kulul ugu weeraray dowladda Kenya, wuxuuna soo bandhigay halgankii loo soo maray Kiiskan, caqabadihii kuu xeernaa iyo aragtida daris wanaagga ku dhisan ee Dowladda...
Qorshaha Wax Ka Bedelka Hawlgalka Amisom oo Soomaaliya Markale Ku Gacan Sayrtey iskana Diidey.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa lagu diiday hindisaha hawlgalka wadajirka ah ee Qaramada Midoobay iyo midowga Afrika ee la doonayo in laga hirgaliyo Soomaaliya sannadka soo socda 2022. Qorshahan ayaa sheegaya in wixii ka dambeeya 2021 howlgalka AMISOM lagu wareejiyo Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay oo wadajir...